Ukwanda nje kuka-0,5ºC kube kwenele ukuqinisa izimo zezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukukhuphuka kwamazinga okushisa emhlabeni jikelele kubanga izinkinga eziningi emhlabeni jikelele. Imicimbi yesimo sezulu, kubandakanya nesomiso, amagagasi okushisa nezikhukhula, iyaqina.
Manje, ngenxa yocwaningo olwenziwe ithimba lesayensi elivela kwi-Research Institute on the Effects of Climate Change in Potsdam (Germany), elishicilelwe kumagazini 'Ukushintsha Kwesimo Sezulu', siyakwazi lokho ukwanda kuka-0,5 degrees Celsius kuye kwanele ukwenza izimo zezulu ezimbi kakhulu ziqine futhi zibe namandla.
Abaphenyi bahlaziye amazinga okushisa abekhona eMhlabeni ezikhathini ezimbili zeminyaka engama-20: kusuka ngo-1960 kuya ku-1979, nokusuka ngo-1991 kuya ku-2010 futhi bakwazi ukuthola ukuthi ukwanda kuka-0,5ºC kuphela kwanele ukuba izimo zezulu ezimbi kakhulu zibe zimbi kakhulu. futhi na ngaphezulu. Ngokwesibonelo, imvula eyeqile ikhule cishe ngo-10% kwikota yomhlabangenkathi amagagasi okushisa ahlala isonto ngokwesilinganiso engxenyeni yezindawo zomhlaba.
Lezi zinguquko iya ngaphezu kokuhluka kwemvelo. Ukusetshenziswa okuqhubekayo kwamafutha ezinto ezimbiwa phansi, kanye nokungcola komhlaba, ulwandle nomoya kufaka isandla ekwenzeni izinto zibe zimbi kakhulu, kuze kufike ezingeni lokuthi, cishe ngaphandle kokuqaphela, uma siqhubeka kanjena, sizobeka izimpilo zethu engcupheni. Eqinisweni, ochwepheshe ngokwabo babikezela lokho Sizoba nokuvuna okubi ngokwengeziwe, ukunikezwa okuphansi kwamanzi okuphuza namaza okushisa kakhulu.
Futhi lokho akushiwo lokho izixhobo zamakhorali, kanye nabo bonke abantu abahlala kuzo, basongelwa kakhulu. Ulwandle oluya lushisa futhi lube ne-asidi alinakuba yikhaya lamakhorali, ngoba badinga i-lime ukuze bakheke.
Uma singenzi lutho, iplanethi enguMhlaba emashumini ambalwa eminyaka iyobe yehluke kakhulu kuleyo esiyaziyo namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukwanda kwama-0,5ºC kuphela kwanele ukuqinisa izimo zezulu